Uthetha ntoni u-K kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ithetha ukuthini i-Instagram kwi-Instagram
Julayi 26, 2019 0 IiCententarios 3178
En Instagram, sifumana imibuzo enomdla kakhulu, kodwa enye yezona zinto ziqhelekileyo kunye kutshanje eqongeni Uthetha ukuthini u-Instagram. Kwaye, xa usebenzisa iinethiwekhi zentlalo okokuqala uyakuqonda ukuba zininzi izinto kunye nemisebenzi eza kukushiya inemibuzo eliqela.
Ke yintoniUthetha ukuthini u-Instagram? Kweli nqaku, siza kusombulula imibuzo eyahlukeneyo onokuba unayo malunga neli qonga leqonga. Kubalulekile ukuba uziqhelanise nayo yonke imibandela, kunye nomxholo ekubonelelwa ngawo yinethiwekhi yoluntu. Kungenxa yoko le nto sikunika lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze ufunde ngeendlela ezahlukeneyo onokuthi uzilawule kwiakhawunti yakho.
Ithetha ukuthini i-K kwi-Instagram?: Fumana apha!
Okwangoku, i-Instagram yaziwa njengeyona yenye yezona ntanethi zinomdla kwaye zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Kutheni le nto? Ilula, inethiwekhi yoluntu inika abasebenzisi bayo amava onxibelelwano angcono kakhulu. Inezixhobo ezininzi kunye nezinto ezikuvumela ukuba udale umxholo osemgangathweni.
Yiyo loo nto, benikwa ukhetho oluninzi olunikelwe liqonga, abasebenzisi abaninzi babuza umbuzo Uthetha ukuthini u-Instagram. Kuqhelekile ukuyigcina le nto kwinani labalandeli beeakhawunti ezahlukeneyo, ngakumbi ezo zabantu abadumileyo. Kwaye, Uthetha ukuthini u-Instagram Inento yokwenza kakhulu nezixa eziphathwe eqongeni, nokuba bangabalandeli, bayalandelwa okanye bayakuthanda.
Ukuba yenye yezona ntanethi zonxibelelwano zixakeke kakhulu kwihlabathi lonke, yazi Uthetha ukuthini u-Instagram Iya kuba luncedo ukuqonda ukuba isebenza njani. Intsingiselo yeK kwi-Instagram inxulumene kakhulu nobungakanani. Inethiwekhi yezentlalo isebenzisa izifinyezo ukwenza lula ukubonisa inani labalandeli, elandelwa okanye elithandayo ngokulandelelana.
Ukongeza ukwazi ukuba yintoni Uthetha ukuthini u-Instagram, kukwakhona esinye isifinyezo esikuM. Kungenxa yoko, ukuba ujonga i-akhawunti yomsebenzisi wabalandeli be50M, uyaku kwazi ukuba umsebenzisi une-50 yezigidi zabalandeli. I-M kumbuzo uthetha "izigidi" kwi-Instagram.
Ngendlela efanayo, kuyenzeka ngoonobumba K; Ukuba ngokuchaseneyo, endaweni ye-50M ubona i-50k, oko kuthetha ukuba umsebenzisi unabalandeli abangama-50 amawaka kwi-Instagram. Ukuba ngu-K kwinethiwekhi yoluntu isalathi "sewaka okanye samawaka".
Kubalulekile ukuba uyazi, ukuba iiwebhsayithi zokunxibelelana zisebenzisa isifinyezo, isincoko kunye nezinto ezingapheliyo rhoqo. Kungenxa yokuba bafuna ukuvelisa izakhiwo ezibanzi kwaye babalaselise umxholo osoloko ugcinwa ngabasebenzisi. Ngale ndlela, ufumana ngakumbi kuyo yonke imisebenzi yenethiwekhi yentlalo, ukuba nakho ukongeza umxholo kunye nezinto kuyo.
Ithetha ukuthini i-Instagram kwi-Instagram kwaye kutheni ifuneka?
Yazi ntoni Uthetha ukuthini u-Instagram Iya kuba yimfuneko xa ulawula iakhawunti yakho. Esi sisishwankathelo sisetyenziselwe iqonga yenye yezinto zokuqala eziza kuqaphelelwa ngabantu xa kungenwa iprofayile yakho kwinethiwekhi yoluntu. Eli nqaku liza kuboniswa kwinani labalandeli, elandelwa okanye ekuthandweni kweefoto zakho, ngokuxhomekeka ekubeni inani lidlula amawaka okanye izigidi ngokwahlukeneyo.
Ngokwesiqhelo, iiakhawunti ezivelisa uninzi lokuzithemba zezi zinto ezinokulandela okulandelayo. Ke, ukuba ungusomashishini, ukufumana unobumba K kuphela kwiakhawunti yakho ye-Instagram kuya kukuqinisekisa ukuthembeka okungcono kunye nokuthembela kubathengi bakho xa ulandela okanye usenza ukuthenga.
Okwangoku, iinkampani ezininzi kwi-Instagram zityala imali kwintengiso yeempawu zazo. Ukuba le nto, iluncedo kakhulu xa uvelisa umfanekiso obalaseleyo weshishini lakho kunye neemveliso ezibonelela zona. Kwelinye icala, ukuba uneprofayile enabalandeli abambalwa, oku kuyakwenza umfanekiso ohlabayo, inqaku elibi lokutsala abathengi.
Umfanekiso ongathandekiyo sisizathu sokuba iinkampani ezininzi kunye nezinto ezintsha zinikezela xa ziqala. Esona sizathu siphambili kukuba abantu abathathe inxaxheba badibanise nokungabikho kokuthandwa kunye neengxaki neemveliso zabo. Nangona kunjalo, kwiimeko ezininzi kungenxa yeendlela ezimbi zokuthengisa; ekhokelela kwishishini lingazimiseli njengophawu oluvunyiweyo nolubonakalayo kwi-Instagram.
Xa oku kucacisiwe, kuya kuba lula kuwe ukubaqonda abathengi bakho. Sicebisa ukuba utyale imali kuthengiso olufanelekileyo kunye nobuchule bezentengiso ukususela ekuqaleni. Ukwenza njalo kuyakuvumela ukuba ufumane impembelelo engcono kwi-Instagram, kunye nabalandeli kunye nabathengi abanokubakho kwi-brand yakho.
Kutheni isifinyezo "K" sisetyenziswa endaweni yenkulungwane?
Njengoko besesitshilo ngaphambilana, isifinyezo okanye ukusetyenziswa kweleta K ku-Instagram luphawu lwenethiwekhi ezahlukeneyo zentlalo. Umsebenzi wayo ukubonisa inani, nokuba bangabalandeli, balandelwe okanye bathande kwiifoto zakho.
Kodwa kutheni usebenzisa isifinyezo endaweni ka "amawaka"? Oku kulula, kwaye kungenxa yomcimbi wokusebenza kwimo yeqonga. Ikwanento yokwenza ntetho kunye nokugcina indawo xa ubhala. I-Instagram, inomdla wokuba umxholo kwiprofaylethi ngowona uphambili. Ngoku ivelaphi? Kuvela isimaphambili sesiGrike esithi "kilo", esiguqulela kwiNkqubo yeZizwe eziManyeneyo, sithetha "iwaka"; Imelwe ngunobumba "k" kwimeko esezantsi.
Ngendlela efanayo, ukongeza ekusebenziseni isishwankathelo "k", kukho ezinye ezi "m" no "b". Kwimeko ye "m" isetyenziselwa ukubonisa inani kwizigidi. Kwelinye icala, u "b" usetyenziselwa ukubonisa inani lezigidi. Yiyo loo nto, kwiiprofayili ezininzi uya kufumana ezi zishunquliweyo njengobonakaliso lwexabiso onalo labalandeli okanye ulandelwe ngokufanelekileyo.
Ithetha ukuthini le leta K kwi-Instagram: Fumana abalandeli abaninzi!
Njengoko ufundile, ukufumana esi sishwankathelo kwiprofayile yakho kuya kuba luncedo kakhulu ukuba ufuna ukuqala ishishini. Ngenxa yale nto, uya kufezekisa ukuthembeka okungcono kunye nokuthembela kubasebenzisi abatyelele iphrofayili yakho. Nangona kunjalo, le ayisiyo into eyenzekileyo kodwa kuya kufuneka uyisebenzele.
Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuba i-Instagram iba yinto enamandla yokuthengisa kunye neqonga lokuthengisa; Ukukhula kwamashishini amaninzi. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu onezixhobo ezifanelekileyo zokulawula iakhawunti yakho. Yiyo loo nto, namhlanje siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo onokuthi uzisebenzise ukuze ufumane abalandeli abaninzi.
Unokuba nomdla: Uyothenga phi abalandeli baka-Instagram?
Amacebo: Ukutsala abalandeli abaninzi!
Ngaba lixesha elide ukususela oko wayila iakhawunti yakho kwaye usenenombolo efanayo yabalandeli? Phola, zizinto ezihlala zisenzeka. Ngoku, iindaba ezimnandi zezokuba ukuba uguquguqukayo kwi-Instagram kukho izisombululo ezininzi onokuzisebenzisa. Nokuba ngaba inkuthazo yakho ikhokelwa kukufumana abalandeli abaninzi njengomceli mngeni omncinci, okanye ngokuchaseneyo, ufuna ukuzikhulisa njengohlobo.
Kuzo zombini ezi meko, kukho izixhobo ezininzi oya kuthi uzibeke ecaleni. Kwaye, i-Instagram ikunika imisebenzi eyahlukeneyo eya kukunceda xa uqhuba kwihlabathi ledijithali. Nika ingqalelo! Kungenxa yokuba iqonga elinokuhlaziywa kulo rhoqo liba lolona hlazo lubalaseleyo lweshishini kunye neempawu zomntu namhlanje.
Ngokusebenzisa amacebo alula esingakunika wona ngezantsi, profiles ezininzi ziye zangena kwilizwe ledijithali. Nangona kunjalo, ukulawula ukufumana ngaphezulu kwe-1k okanye i-1m kubalandeli kwinethiwekhi yoluntu. Musa ukuhlala ngasemva kwaye ufunde nathi ngayo yonke into onokuyenza ukufumana okuninzi kwi-Instagram.
Unxibelelwano olufanelekileyo loluntu
Akukho mfihlo kuye nabani na ukuba ngaphandle kwe-Instagram kukho iinethiwekhi ezininzi zentlalo esizilawulayo ngoku. Nokuba, i-Instagram ikunika inketho yokudibanisa iakhawunti yakho ye-Facebook kunye ne-Twitter kunye neprofayile yakho yobuqu, unenketho yokwabelana ngomxholo ukusuka kwiprofayile yakho ukuya kumaqonga.
Kule meko, injongo iya kuba kukusebenzisa iakhawunti zakho kwezinye iinethiwekhi zentlalo ukukhuthaza i-Instagram. Sicebisa ukuba ufake igama lomsebenzisi kwiinkcazo ze-akhawunti yakho ye-Facebook kunye ne-Twitter. Olunye ukhetho kukujoyina iqela kwaye unxibelelane nabahlali, ubacele ukuba bakulandele kwaye ubalandele emva.
Ngoku, ukufumana abalandeli, ayizukuanela ukulayisha iifoto zobomi bakho kunye nezentlalo kwi-Instagram. Yila ubugcisa! Kuya kufuneka uvelise owona mxholo uphakamileyo unokwenzeka. Ukuba ulahlekile kancinci kuyo, sicebisa ukuba ujonge izihloko ezinomdla kakhulu kwi-Instagram kwaye uvelise umxholo oluvela kulolu lwazi.
Yeyona ilula, ukusebenzisa esi sicwangciso kufuneka ukongeza iithegi okanye ii-hashtag kuzo zonke iifoto zakho. Kodwa hayi nje nayiphi na ithegi, qiniseka ukuba banxulumene ngokupheleleyo nomxholo oyithumelayo. Olu khetho lolunye lolona lubalaseleyo nolusebenzayo, kuba ikuvumela ukuba ufumane ukubonakala ngakumbi kweefoto owabelana ngazo kwi-Instagram. Sicebisa ukuba usebenzise iileyibhile kuzo zombini iSpanish nesiNgesi, ukuze umxholo wakho ubonwe ngabahlali bobabini.
1 Ithetha ukuthini i-K kwi-Instagram?: Fumana apha!
1.1 Jonga imizekelo!
2 Ithetha ukuthini i-Instagram kwi-Instagram kwaye kutheni ifuneka?
2.1 Ngaba iluncedo?
3 Kutheni isifinyezo "K" sisetyenziswa endaweni yenkulungwane?
4 Ithetha ukuthini le leta K kwi-Instagram: Fumana abalandeli abaninzi!
4.1 Amacebo: Ukutsala abalandeli abaninzi!
4.1.1 Unxibelelwano olufanelekileyo loluntu
4.1.2 Izihloko zomdla
Yintoni enokwenziwa kwi-Instagram?